पाका दम्पतीलाई यौन शिक्षा | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← मसलेदार मात्रै
यौन अरुचि किन ? →
पाका दम्पतीलाई यौन शिक्षा
Posted on 21/12/2010 by नारायण नेपाल | टिप्पणी छोड्नुहोस्
मोटी मोडलः सधैं पातली महिलालाई मात्र लक्षित गरेर फेसन शो भएपछि मोटी महिलाहरूको फेसन चाहना अधुरो हुँदै आएको थियो । सिंगापुरको एक फेसन हाउसले मोटी महिलाहरूलाई लक्षित गरेर नयाँ डिजाइनका पहिरनहरू मोटी मोडललाई नै प्रयोग गरेर प्रदर्शन गर्‍यो ।
पारपाचुकेको संख्या घटाउन मलेसियाको उत्तरी भेगमा अवस्थित टेरेनगानु राज्यमा पाका दम्पतीहरूलाई यौन शिक्षा दिन थालिएको छ । यो शिक्षाअन्तर्गत उनीहरूलाई यौन आचरणको शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै निःशुल्क हनिमुनको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
एक साताको यो यौन कक्षाको मुख्य उद्देश्य उनीहरूमा यौनचाहना जगाउनु हो । अधिकांश पाका दम्पती अलग सुत्छन्, जसका कारण उनीहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध कायम नहुँदा उनीहरूको अन्य सम्बन्ध पनि बिग्रँदै जान्छ । यही कारणले उनीहरू पारपाचुके गर्ने अवस्थामा समेत पुग्ने गरेका छन् । राज्यको परिवार विकास संघका प्रमुख मोहम्मद सफरुद्धिनका अनुसार यो शिक्षाअन्तर्गत दम्पतीहरूलाई यौनचाहना बढाउने उपाय मात्र सिकाइँदैन, उनीहरूका समस्या बुझेर औषधीसमेत उपलब्ध गराइन्छ ।
मलेसिया मुस्लिम राष्ट्र भएका कारण यौन शिक्षा लागू गर्न कठिन छ, तर पछिल्लो पटक पारपाचुके गर्ने अवस्थामा पुगेका १० जोडी दम्पतीलाई यौन परामर्श दिएपछि सात जोडी नयाँ विवाहित जोडीका रूपमा घर फर्किएका थिए ।
गत वर्ष यही संस्थाले नयाँ विवाहित जोडीहरूलाई पनि विवाहपछिको यौनसम्बन्धले पार्ने प्रभावका विषयमा परामर्श कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कक्षामा उनीहरूलाई कामोत्तेजना बढाउने सुगन्ध, पहिरन, सँगै निर्वस्त्र स्नान गर्नेजस्ता कुरा सिकाइएको थियो । अहिले राज्य सरकारले स्थानीय सौन्दर्य प्रसाधन विक्रेताहरूलाई जोडीहरूले प्रयोग गर्ने सुगन्धको बिक्री बढाउन अनुरोध गरेको छ । शरीरबाट दुर्गन्ध आएकै कारण पनि कतिपय दम्पतीको सम्बन्ध बिगि्रएको पाइन्छ ।
अहिले परामर्शमा आउने पाका दम्पतीहरूलाई दुई रात तीन दिनको निःशुल्क हनिमुन प्याकेजको व्यवस्था मिलाइएको छ । समुद्री तट र द्वीपमा मनाइने दोस्रो हनिमुनको प्याकेजमा पनि उनीहरूलाई यौन परामर्श प्रदान गरिन्छ ।
बहराइनमा दोस्रो सेक्स सप
मुस्लिम बाहुल्य बहराइनको मानामामा सेक्स सपको दोस्रो शाखा सञ्चालनमा आउने भएको छ । सन् २००८ मा पहिलो पटक सेक्स सप खोलेकी खादिजा अहमदले बढ्दो मागका कारण दोस्रो शाखा खोल्न लागेको बताइन् । ३२ वर्षीया तीन सन्तानकी आमा खादिजाले मुस्लिम राष्ट्रमा सेक्स सप खोल्नु र त्यसका शाखा बढाउनुलाई चुनौतीपूर्ण कार्य मानिएको छ । एकातर्फ उनको कामको प्रशंसा हुँदै अन्य देशहरूले पनि खादिजा फेसन हाउस अन्तर्गत सेक्स सप खोल्ने चाहना व्यक्त गरिरहेका छन् । अहिले खादिजाले कतारको राजधानी दोहामा सेक्स सप खोल्ने योजना बनाएकी छिन् भने लेबनान र दुबईका लगानीकर्ताहरूले प्रस्ताव राखेका छन् ।
आफ्ना कतिपय ग्राहक मुस्लिम भएका कारण अरब मुलुकतिर दम्पतीहरूको यौन आचरणमा परिवर्तन आएको र त्यसले उनीहरूको सम्बन्धलाई अझ गाढा बनाएको खादिजा बताउँछिन् । उनी पनि दम्पतीहरूको सम्बन्ध यौनसाधनले प्रगाढ बनाएकोमा खुसी छिन् । अहिले उनको सेक्स सपमा महिलाको भित्री पोसाकदेखि चिल्लो पदार्थका समेत गरी १ हजार ८ सय किसिमका यौन प्रसाधन पाइन्छन् । उनको पसलका लागि अहिले मासिक रूपमा २० देखि ३० वटा पानीजहाजका कन्टेनरमा यौन प्रसाधन आउँछन् ।
यौनसामग्रीको कारोबार राम्रो भए पनि खादिजाले भन्सार अधिकारीहरूबाट बेलाबेलामा दुःख पाउने गरेकी छिन् । आफूले सबै सामग्री वैधानिक रूपमा अमेरिकाबाट मगाए पनि भंसार अधिकारीहरूले दुःख दिने नियतले पक्राउ गरेर महिला यौनकर्मीहरूसँगै थुनेको कुरा खादिजाले गल्फ डेली न्यूजलाई बताएकी छिन् ।
पुरानो कन्डमको लिलाम
धेरै मानिसलाई लाग्न सक्छ, कन्डमको इतिहास लामो छैन, तर कन्डमको इतिहास हामीले सोचेभन्दा निकै पुरानो छ । प्राचीन इजिप्टमा पनि कन्डमको प्रयोग हुने गरेको प्रमाण फेला परेको छ । हालै अस्टि्रयाको एक लिलामगृहले १ सय १० वर्ष पुरानो कन्डम लिलाम गरेको छ ।
माछाको ब्लाडरबाट निर्माण भएको उक्त कन्डम अहिलेको जस्तो एक पटकलाई मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने किसिमले बनाइएको थिएन । एउटा कन्डम न्यूनतम १० पटकसम्म प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । बक्समा लेभलसहित आउने उक्त कन्डमको लिलाम मूल्य ३ सयदेखि ५ सय युरो तोकिएको थियो । लिलाम बढाबढ हुँदा एक प्याकेट कन्डम १ लाख ९० हजार रुपैयाँमा बिक्री भयो । लिलाममा बिक्री भएको कन्डम कति पटक प्रयोग भएको थियो भन्ने कुरालाई क्रसचिह्न लगाएरसमेत देखाइएको थियो ।
प्लेब्वाइ हार्ड डिस्क एडिसनमा
सन् १९५३ देखि नियमित प्रकाशित हुदै आएको प्लेब्वाइका सबै अंक हेर्ने कमै होलान् ? मार्लिन मुनरोलाई आवरण प्रकाशित गर्दै प्रारम्भ भएको प्ले ब्वाई म्यागजिनले विश्वव्यापी रूपमा वयस्क म्यागजिनको दर्जा पाएपछि यसका पारखिहरू अझ बढिरहेका छन् । प्लेब्वाइका पछिल्ला प्रशंसकहरूले यसका सबै अंक हेर्न नपाएको परिप्रेक्ष्यमा यसका संस्थापक ह्युग हेफनरले सबै अंकलाई हार्ड डिस्कमा राखेर बजारमा ल्याएका छन् । विगत ५६ बर्ष देखि प्रकाशित हुँदै आएको प्लेब्वाइका ६ सय ५० अंक प्रकाशित भएका छन् । ती अंकका १ लाखभन्दा बढी पाना छन् । २ सय ५० जिबीको उक्त ड्राइभको मूल्य ३ सय अमेरिकी डलर छ ।
र्‍याम्बोको अश्लील चलचित्र
सिल्भेष्टर स्टेलोनको छबि एक्सन हिरोका रूपमा छ । अझ चलचित्र र्‍याम्बोको सफलताले उनलाई एक्सन हिरोको नयाँ उचाइमा समेत पुर्‍यायो । हलिउडमा संघर्ष गर्ने क्रममा कुनै चलचित्रमा अभिनय गर्न नपाएपछि उनलाई एक कामोत्तेजक चलचित्रबाट काम गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । पहिल्यै निर्माण भएको ँद पार्टी एट् किट्टी एन्ड स्टुड’ को कथासँग मेल खाने ‘इटालियन स्टालियन’ मा स्टेलोनले अभिनय गरेका थिए । ब्रासटोन डिस्टिब्युटरले ३५ मिलिमिटर फरम्याटमा निर्माण गरेको उक्त चलचित्रको नेगेटिभलाई इबेमा लिलामका लागि बिक्रीमा राख्दा ४ लाख १२ हजार १ सय डलर प्राप्त भएको छ ।
सन् १९७० मा निर्माण भएको उक्त चलचित्रलाई ब्रासटोनले सन् २००९ मै एमजीएम कम्पनीलाई बिक्री गर्न खोजेको थियो । त्यो बेला चलचित्रको नेगेटिभ नपाएका कारण बिक्री हुन सकेको थिएन । सन् १९७६ मा पहिलो पटक प्रदर्शन भएको ‘इटालियन स्टालियन’ लाई सन् २००७ मा पुनः प्रदर्शन गरिएको थियो । स्टेलोन पैसाका लागि जे गर्न पनि तयार भएको अवस्थामा उनलाई अनुबन्ध गरिएको थियो । स्टेलोनले त्यो बेला प्लेब्वाइ म्यागजिनलाई अन्तवार्ता दिँदै भनेका थिए, ‘मैले यो चलचित्रमा दुई दिन काम गरेर २ सय डलर कमाएँ, तर पछि चलचित्र रक्की हिट भएपछि उक्त चलचित्रको सर्वाधिकार लिन १ लाख डलरको प्रस्ताव आएको थियो ।’
मानिसको प्रेम र यौनजीवन उमेरको वृद्धिसँगै नीरस हुँदै जान्छ । एसोशिएट्स प्रेस तथा लाइफ जियो स्ट्रङले पछिल्लो पटक गरेको सर्वेक्षणमा उक्त तथ्य देखा परेको हो । १ हजार ५ सय व्यक्तिमा गरिएको सर्वेक्षणमा ४५ देखि ६५ वर्षका दम्पतीमध्ये २४ प्रतिशत दम्पतीले आफ्नो वैवाहिक जीवन नीरस रहेको बताए भने ७ प्रतिशतले मात्र अझ उत्साहजन भएको जानकारी दिए । ३० देखि ४४ वर्षका दम्पतीहरूमा भने केवल २० प्रतिशतले आफ्नो यौनजीवन नीरस रहेको बताएका थिए । यौनमार्फत दाम्पत्य जीवन सुखद रहनेहरूमा १८ देखि २९ वर्षका दम्पती देखिए, जसमा केबल १२ प्रतिशतले मात्र आफ्नो वैवाहिक यौन जीवन नीरस रहेको बताए ।
यौनजीवन नीरस हुनुको मुख्य कारणमा दम्पतीहरूबीच कुराकानी कम हुनुलाई पनि मानिएको छ । ४५ देखि ६५ वर्षका पुरुषहरू यौनसम्पर्कलाई स्वास्थ्यसँग जोड्नुपर्ने मान्यता राख्छन् भने सोही उमेर समूहका महिलाहरू यौन मात्र सबै कुरा होइन भन्छन् ।
posted by:-dambar prasad rimal sourced by: saptahiknepali